အသက်ပေးဆပ်ခဲ့ရမှုတွေအတွက် အလဟဿမဖြစ်အောင် အဆုံးသတ်ထိ တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ထုတ်ပြန် – PVTV Myanmar
·7months ago ·35 Comments
၅ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၁
နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ အသက်ပေးဆက်ခဲ့ရမှုတွေ၊ အလဟဿ မဖြစ်စေရန်အတွက် သမိုင်းကပေးသော တာဝန်ကို ဦးထိပ်ရွက် ဆင်ရင်း အဆုံးသတ်အထိ တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ ကတိသစ္စာပြုပါကြောင်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်စွဲနဲ့ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကြည်မြင်တိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာ ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက် မနက်ပိုင်းက စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေး ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေတဲ့ သပိတ်ကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ကားနဲ့ဝင်တိုက်၊ သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်တာကြောင့် လူငယ်အချို့ကျဆုံ၊ အဖမ်းခံရမှုဖြစ်စဉ်အပေါ် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရာမှာ အထက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့တာပါ။
အခုလိုဖြစ်စဉ်က အကြမ်းဖက် စစ်တပ်က လုပ်ဆောင်တဲ့ ပထမအကြိမ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်မှာ မြိတ်မြို့မှာ ဆန္ဒပြသူတစ်ဦးကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ကားနဲ့ဝင်တိုက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။
ဧပြီ ၁၅ ရက်မှာ မုံရွာသပိတ်ခေါင်းဆောင် ကိုဝေမိုးနိုင်ကို သပိတ်ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းမှာ အရပ်သုံးကားနဲ့ ဝင်တိုက်ပြီး အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ မေလ ၂ ရက်မှာလည်း ရွှေဘိုပင်မသပိတ်ကြောင်း လူစုနေစဉ်မှာ လူအုပ်ထဲ ကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီး ဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မေ ၆ ရက်မှာ လည်း မွန်ပြည်နယ် ချောင်းဆုံးမြို့နယ်အတွင်းမှာ ဆိုင်ကယ်ဆီးလာတဲ့ ပြည်သူတစ်ဦးကို ကားနဲ့တိုက်ပြီး ဖမ်းလို့ ပြည်သူတစ်ဦး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။မေလ ၂၁ ရက်မှာလည်း ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ လူငါးဦးကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ကားနဲ့တိုက် သေနတ်နဲ့ပစ်ပြီး ဖမ်းခဲ့ပါတယ်။ မေ ၂၈ ရက်မှာ မန္တလေး သံဃသမဂ္ဂသပိတ်စစ်ကြောင်းကို ကားနဲ့တိုက်ပြီး သံဃာနှစ်ပါးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ ဇွန် ၆ ရက်မှာ မန္တလေးမြို့မှာ လူငယ် ၃ ဦးစီးလာတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီး ဖမ်းဆီးလို့ လူငယ်နှစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အောက်တိုဘာ ၂ ရက်မှာလည်း သံဃာသပိတ်စစ်ကြောင်းကို ကားနဲ့တိုက်ပြီး ဖမ်းလို့ သံဃာငါးပါးနဲ့ ပြည်သူ သုံးဦးအဖမ်းခံခဲ့ရသလို LGBT အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူဖြစ်တဲ့ စူးရှရှင်းသန့်ကိုလည်း အဲဒီနေ့မှာပဲ ဆိုင်ကယ်ကို ကားနဲ့တိုက်ပြီး ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်မှာ လူငယ်တွေ ဆန္ဒပြဖို့ စုဝေးနေချိန် ကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းလို့ လူငယ် ၁၀ဦး အဖမ်းခံရပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေတဲ့သူတွေကို ကားနဲ့တိုက်ပြီး သတ်ဖြတ်တာ၊ အကြမ်းဖက် ဖမ်းဆီးတာတွေက လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက် ယုံသာမက အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်ဖြစ်လို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြု ကော်မတီနဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့က အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် တရားဝင်ကြေညာထားပြီးဖြစ်တာကြောင့် အခုလိုမျိုး အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းက ပြည်သူတွေကို ပေါ်ပေါ်တင်တင် အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်နေမှုတွေကို နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝန်းကပါ အရေးယူမှုတွေပြုလုပ် ပေးဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။
PVTV သတင်းအစီအစဉ်မှာ ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ သတင်းတွေထဲက တစ်ပတ်အတွင်း ကောင်းနိုးရာရာတွေကို စုစည်းပြီးတော့ တစ်ပတ်အတွင်း သတင်းဒိုင်ဂျက် (Weekly News Digest) အစီအစဉ်အဖြစ်နဲ့ ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ Weekly News Digest အစီအစဉ်ကို အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါအပြင် ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းကို အသိတရားရှိရှိနဲ့ ကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။အဖိုးတန်လှတဲ့ ပြည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အသက်ပေါင်းများစွာကို ယခုလိုရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခံနေရတာတွေ၊ ပညာသင်ပြီး ကိုယ့်ဘဝတိုးတက်ရေး၊ တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေး ကြိုးစားရမဲ့ လူငယ်တွေ လမ်းပေါ်မှာ ဆန္ဒပြရင်း သေကျေကြရတာတွေ၊ မိဝေးဖဝေး လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲဝင်ရင်း ပင်ပန်းဆင်းရဲ ခံကြရတာတွေ ၊ မတရားဖမ်းဆီး ခံရပြီး စစ်ကြောရေးမှာ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခံ အသက်ဆုံးရှုံးခံရတာတွေအားလုံး အမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ အတွက် ပြည်သူတွေအားလုံးမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီရဲ့ စုပေါင်းဆွမ်းဆန်လောင်းလှူပွဲမှာ မပါဝင် ကြဖို့ ကျောက်ပန်းတောင်းလူငယ်တွေက မြို့လူထုကိုတိုက်တွန်းထားလို သံဃာတော်တွေကိုလည်း မကြွဖို့ လျှောက်ထား
Mg Sai says:
2021-12-05 at 10:33 PM
စာပဲထုတ်နေလိုက် လေးလိုင်းပေါ်ကပဲ ပြင်ပြင်ထန်းထန်း တိုက်နေ ပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်ပါ
မအလအဖွဲ့ဟာ မကြာခင် ရုရှားမှ လက်နက်အမြောက်အများ ရောက်ရှိလာဖွယ်ရှိ ကိုယ့်ဘက်က လက်ဦးမူ့ရယူပါ
Chit Poe Ein says:
2021-12-05 at 10:34 PM
DSA-52 ၾကည္း 56883 ပါ။
အဲ့မွာအကုန္ရွိတယ္ တဲ့ //
Htet Aung Win says:
2021-12-05 at 10:41 PM
အဆုံးထိကတော့ အကုန်အဆုံးထိပဲလို့ပြောကြတာပဲ ခင်မျ
ဇူဇူ့ ကို မုန်းတယ် says:
2021-12-05 at 10:48 PM
အာ့ဆွင်လည်း ပိရော ပိရော
Ko Shan Gyi says:
2021-12-05 at 10:49 PM
Aung Htet Maung says:
2021-12-05 at 10:54 PM
မင်းတို့တွေပေးဆပ်ဖို့ပြင်ထားပါ စခတွေ …
Lynn Khant Wai says:
2021-12-05 at 10:56 PM
ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့သူတွေအတွက် တန်ရာတန်ကြေး ရအောင်ပြန်ယူပေးပါ
AmamYar ShweSin says:
2021-12-05 at 11:03 PM
မြန်မြန်လေး လုပ်ပေးကြပါတော့ ကလေးတွေ သေနေတာ မြင်ရက်စရာ မရှိတော့ဘူး။
2021-12-05 at 11:12 PM
ဒါပဲလား ဘာလုပ်တက်သေးလဲ ? ပြော
တို့ NUGမှာမြို့ပြ ပျောက်ကြားတပ် ရှိတယ်။ PDFs ရှိတယ် ။ ကျူးလွန်တဲ့ အကြမ်းဖက်သမား၃ယောက်ပုံတွေအတိအကျ ရှိတယ် ။
NUG ဘာပြန်လုပ်ပေးနိုင်သလဲ အခုကိစ္စအတွက် ။
စာတစောင်ထုတ်တာ ငါလည်း လုပ်တက်တာပဲလေ
Saw Hlinphyu says:
2021-12-05 at 11:24 PM
2021-12-05 at 11:25 PM
✔️✔️✔️ 💪💪💪 👍👍👍😭🙏
2021-12-05 at 11:29 PM
2021-12-05 at 11:45 PM
Nay Zaw Aung says:
2021-12-05 at 11:54 PM
စာကြီးထုတ်မနေနဲ့ လက်တွေ့လုပ်သင့်နေP NUG😏😏
Alexis Aung says:
2021-12-06 at 12:03 AM
Thakhin Saw Gyi says:
2021-12-06 at 12:11 AM
ဖျင်သာခံလိုက် အာ့လို တေ statement တွေပဲထုတ်နေလိုက်
2021-12-06 at 12:18 AM
Starry Vin says:
2021-12-06 at 12:22 AM
2021-12-06 at 12:39 AM
ျဖဴ စင္ says:
2021-12-06 at 3:59 AM
Daw Thein Gi says:
2021-12-06 at 5:32 AM
Gen Zan says:
2021-12-06 at 5:50 AM
သများကျတော့ဆဲ ကိုယ့်စောက်ဖိုင်ကျတော့ပိတ်ထား အကျာကျတော့ဝိုးခ
Bar Myu Dar says:
2021-12-06 at 7:33 AM
စစ်တပ်ကို စစ်ရေးဖြင့်သာ အနိုင်တိုက်နိုင်ပါမည်
စစ်ဖြစ်လျင် တိုင်းပြည် ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက်ကြေပါမည် မတိုက်ပဲနေပါက သားစဉ်မြေးဆက် ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက်ကြေပါမည်
ထို့ကြောင့် တိုင်းပြည် ခဏတာ ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက် ကြေမှာကို ငဲ့ညှာမနေပဲ တိုက်စရာ ရှိတာ အပြတ်တိုက်စေချင်ပါသည် ထိုအခါ ပြည်သူကလည်း ရရာလက်နက် စွဲကိုင်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်ကြပါလိမ့်မည်
Kyi Kyi says:
2021-12-06 at 7:54 AM
Bms VP says:
2021-12-06 at 8:17 AM
NUG ရယ် စကစ ကိုမတိုက်ရဲတာလာ ဒေါ်စု က ငါ့အဖေတည်ထောင်တဲ့တပ်ဆိုပြီးICJ အထိကာကွယ်ခဲ့လို့ မတိုက်တာလာ ဖြေထပးပါအုံး ခင်ဗျာ မှာ PDF ၂သောင်းကျော်လောက်ရှိပြီး စကစကို ယနေ့ထိတခါမှ ဘာလို့မတိုက်သေးတာလဲ…local pdf and တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေကို အားမနာရင်နေပါ စာတော့မထုပ်နဲ့တော့ လက်တွေ့စကစ ကိုတိုက်တဲ့နေ့မှ စာတွေပြန်ထုတ်ပါတော့..
San San Yu says:
2021-12-06 at 8:26 AM
2021-12-06 at 9:05 AM
Doubleu Force says:
2021-12-06 at 9:27 AM
ေစာေမာင္ ေမာင္ says:
2021-12-06 at 9:31 AM
Nug ကိုယ့္ျပည္သူကိုအသက္ရင္းျပီး အာဏာရလိုတာထက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ဖယ္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပုံကို ျပဌာန္းၿပီး လက္ခံလိုက္ရင္ တိုက္မယ့္သူကအဆင္သင့္ရွိထားတာ ခုေတာ့ မတတ္နိုင္ဘူး ေသဆုံးသြားတ့ဲ ေျမဇာပင္ ဗမာ
မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္စိတ္မေကာင္းထပ္တူဝမ္းနည္းရပါတယ္ ဖယ္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအတည္မျပဳသ၍ စိတ္မေကာင္းစရာသတင္း ထပ္ေတြ႕ဦးမွာပဲ
Yoe Shinn says:
2021-12-06 at 9:36 AM
Daw San San says:
2021-12-06 at 10:22 AM
2021-12-06 at 10:25 AM
2021-12-06 at 1:26 PM
2021-12-06 at 2:52 PM
အေဝးကေနထုတ္ျပန္တာေတြလုပ္ေနမယ့္အစား ကိုယ္တိုင္ ဦးစီးၿပီး လုပ္ျပပါလားကြာ ၾကည္ညိဳျခင္လြန္းလို႔ပါ လာစမ္းပါဟ. ပန္းေခြေကာင္းေကာင္း ပို႔ေပးဘို႔. တာဝန္ယူပါတယ္
Maung Lwil says:
2021-12-06 at 6:37 PM
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကို အရေးယူနိုင်ဖို့ နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းနဲ့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ(CRPH)က သတင်းထုတ်ပြန်